နေ့စဉ်လုပ်သင့်သည့်အလေ့အကျင့် ၁၆ ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
16 အလေ့အထကိုသင်နေ့စဉ်ပြုပါသင့်တယ်။ (ဤငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်) [fixed]
1 လေ့ကျင့်ခန်း - လေ့ကျင့်ခန်းကြီးမားသည်။ ငါခေတ္တတိုအသုံးအနှုန်း၌သငျဖို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုပေါ်ထိမိဒါပေမယ့်လည်းပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစဉ်းစားပါ။ သငျသညျ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းပေါက်သင့်ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှငျ့ခှနျအားတိုး (ဒဏ်ရာလျော့နည်းအခွင့်အလမ်း) သင့်သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတပ်ရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတိုင်း, သင်တို့၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကကျားကန်သည်ကိုသင်ပိုရှည်သည်သင်၏လူငယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, သင်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်သန်စွမ်းကျော်သယ်ဆောင် သင်၏အသက်တာ, သင့်ကျိန်းဝပ်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုဆင်းသွားတယ်, သင်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၏အထွေထွေခံစားချက်ရှိသည်။ တော်တော်ချိုမြိန်။ ရှင်းနေသည်မှာလေ့ကျင့်ခန်းသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်; ယင်း၏အတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်နှစ်မျိုးလုံးပေးတော်မူ၏။
ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းဒီလိုလုပ်ဖို့လိုသလား။ ဒါကအင်အားကြီးမားပုံရသည်။ သင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုချဲ့ဖို့ကြိုးစားပါ - သင်ကသင်၏နေ့စဉ် 100% မပေးပါဘူး။ အချို့သောရက်များသည်အလေ့အထကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ၁၀ မိနစ်မျှရိုးရှင်းသောအလင်းဖြန့်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားနေ့ရက်များမှာ ၂.၅ နာရီနဂါးအားကစားရုံများဖြစ်နိုင်သည်။
ငါငါ့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးသောနှစ်ခုကတခြားအမှုအရာ, ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်သဘာဝရတဲ့ပွီးမွောကျကကူညီရန်ဤအလေ့အထကိုအသုံးပြုပါ။ မကြာခဏကြိမ်, ငါ၏ခှနျအားစိုကျထုပန်းခြံမှတဆင့်သို့မဟုတ်အရေမျက်နှာစာတစ်လျှောက်တစ်နာရီလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ဘာဝနာကျင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုနှင့်နေ့စဉ်ဘဝကူးကျွမ်းကျင်မှုသယ်ဆောင်ကူညီရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းအပေါ်အလားတူ balancing အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
သင်တို့မူကားထွက်အလုပ်လုပ်ရန်သင့်အားပြောပြရန်ငါ့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်လူများကမှတ်တမ်းတင်ကြသည်။ ထောက်ခံမှုနှင့်သင်လှုံ့ဆျောလှုံ့ဆော်မှု၏အဆုံးမဲ့သတင်းရင်းမြစ်များအတွက်ကွန်ရက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များရှိပါတယ်။
2 တှေးတောဆငျခွ - ဤအလေ့အထကြီးမား fucking ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆငျခွငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူ့အတှေ့အကွုံဝိညာဉ်ရေးလိပ်စာများကိုအဘယျစိတျအပိုငျးကိုစဉျးစား - အတ္တကြောက် - SO မိန်းကလေးငယ်များအပေါ်နှိပ်အတူတက်ချည်ထားကြသည်နှစ်ခုသဘောတရားများ။ ငါအကျိုးကျေးဇူးများပထမဦးဆုံးမှာအလွန် intangible ကြောင့်လူတွေအများကြီးကဒီမှာတက် messed ရထင်ပါတယ်။ ကျွန်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း Mastery ၏ "S ကိုကွေး '" shit နို့စို့' 'တစ်ဦးအလွန် looong ကာလရှိပါတယ်။ သငျသညျကြုံတွေ့နေလျှင်အဘယ်အရာကိုတရားအားထုတ်သင့်ရဲ့ image ကိုကမှားများကဲ့သို့ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျဆငျခွငျဖို့သင်ယူအဖြစ်သင့်မျှော်လင့် Fighting အဆက်မပြတ်စစ်တိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်သင်ယူကူညီရန်အချို့အရင်းအမြစ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ Reddit အပိုဒ် - ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်လိုစိတ်ကို meditation ဖို့အလွန်စုံစုံမိတ်ဆက် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အတိမ်အနက်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုဖုံးသော Amazing စာအုပ်။
တှေးတောဆငျခွသီးသန့် - 10 နေ့ကအထူးကြပ်မတ်ဖျန်ဖြေဆုတ်ခွာနေ Holosync - တရားအားထုတ်ရန်ပြည်နယ်သွေးဆောင်ကြောင်းတိပ် (အကြီးအလေ့ကျင့်ရေးဘီး) တစ်ဦးက fortuitous လူတစ်အသံလေ့လာဆည်းပူးခြင်းနည်းလမ်းများရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ Hurr durr - အလေ့အကျင့် (၎င်း၏ .flac နှင့် .mp3 မဟုတ် format နဲ့ + ကောင်းသောနားကြပ်နဲ့နားထောင်သေချာအောင်) ။ နေ့စဉ်တှေးတောဆငျခွစတင်ပါ။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများနှစ်ဦးစလုံးနေရာအများစုနှင့်မျက်မြင်လက်တွေ့တစ်အပြတ်အသတ်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ တှေးတောဆငျခွဒါကြောင့်သင့်ကိုမဆိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဆင်ခြေဖြစ်ပါသည်, ယနေ့မစတင်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
သင်က၏ Hang ရပြီးတာနဲ့သင်ကဗဟိုပြု, အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်စိတ်အေးလက်အေးခံစားတရားအားထုတ်ရန်အစည်းအဝေးများချန်ထားမည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကူးတွေဆီကိုကူးစက်ထားတဲ့အတ္တ-လျော့နည်းလာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အသိအမြင်တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်အလေ့အကျင့်ကိုတက်စောင့်ရှောက်လျှင်သင့်မျက်မှောက်အသံ sensitivity ကိုပြုသကဲ့သို့, သင်သိသိသာသာကြောင်းကိုသင်၏အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို span တိုးသတိထားမိပါလိမ့်မယ် (သင်ပြုပါအရှိဆုံး visceral အရာထင် - လိင်, အစာစားခြင်း, အားကစားစတာတွေ) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နှောက်ဒေသများ, interoception နှင့်အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့လိမ့်မည်စာသား [url =http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361002/ ] [/ url] ထူဖြစ်လာသည်။
ရေရှည်မှာတော့တရားအားထုတ်ဒါဟာသင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းမည် '' သင်အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားမည်သို့လေးနက်တဲ့အသွင်ပြောင်းလဲရေး '' ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးသင်ကလုပ်နေတာခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3 စာဖတ်ခြင်း - မှန်ကန်သောစာအုပ်များကိုသင်ဖတ်ရှုလျှင်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုခံရလိမ့်မည်။
သငျသညျမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်သောအရာကိုစဉ်းစားပါ။ အကြင်သူသည်ကရေးသားသည့် Inter အပေါ်တစ်ဦးသန်း shitty ဘလော့ဂ်များရှိပါတယ်။ ထိုအခါမူကားသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုအဲဒီမှာအထဲကစာအုပ်တွေ theres ။ ကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးပါရမီရှင်လူသားတွေရေးသားခြင်းနှစ်ပေါင်းကုန်ရပြီကြောင်းစာအုပ်များ။ အတွေ့အကြုံ, ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်သင်ခန်းစာများကိုanice လက်ကိုင်အလွယ်တကူစာပုံစံ၌သင်တို့ကိုအားပေးပြီးမှလေ့လာသင်ယူ၏တစ်သက်တာ။ 🙂
ငါတစ်နှစ်ခွဲနာရီတစ်ရက်မှာဒီအလေ့အထစတင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကငါတစ်နေ့တစ်နာရီအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းစတင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စာအုပ်များမှတဆင့်မီးလောင်သောနေပါတယ်။ သင်၌အချက်အလက်များ၏အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနှင့်အတူ (သင့်အသက်တာကိုမှအသိပညာလျှောက်ထား) ထွက်စီးဆင်းရန်သတင်းအချက်အလက်အဘို့သင့်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်
စာဖတ်ခြင်းကိုချွတ်ပယ်ရန်လွယ်ကူသောအလေ့အကျင့်သည်နှင့်သင်ကဦးစားပေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုမှန်မှန်ဖတ်ရှုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကောက်အဖြစ်အိပ်ပျော်စတင်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစနစ်တကျအေးစက်နှင့်သင်သည်ထိုကာလကတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းရန်မလိုအပ်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့စာဖတ်အမြန်နှုန်းနှင့် comprehension အချိန်ကျော်တက်ကောက်ကြဘူး - ကိုယ့်ကကပ်။
4 ကို Creative အပန်းဖြေ - လူများသည်ဤနည်းကိုအလွန်ကွဲပြားစွာချဉ်းကပ်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခုခုရှိပါကသင်ထိုင်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့ရန်အတွက်သာထိုအရာသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သင်၏အပြည့်အဝဖော်ပြမှုကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်စီးဆင်းမှုအခြေအနေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။ ငါ့အဘို့ကတူရိယာကစားခြင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်စုံသောနေရာတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဂစ်တာသို့မဟုတ်စန္ဒယားတီးနေသည်ကိုမြင်ဖူးပါကကျွန်ုပ်ပြောနေတာကိုသင်သိလိမ့်မည်။ တူရိယာတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်း၏“ S” ကွေးသည်အလွန်ရှည်လျားလွန်းသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ထည့်လိုက်တဲ့အရာကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အပန်းဖြေမှုတွေကသင့်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စေပြီးနေ့ကိုမကြာခဏဖြိုခွဲနိုင်ပြီးပေါ့စေနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ဝါသနာများ၌သင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့ထဲမှများများထွက်လာလိမ့်မည်
ငါအပန်းဖြေတဲ့အားကစားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေးချင်သောကွောငျ့ငါ '' ဖန်တီးမှုအပန်းဖြေ '' အဖြစ်ဤအလေ့အထယေဘူယျ။ ကြော်ငြာစောင့်ကြည့်သည့်အိပ်ရာပေါ် Vegetating အပန်းဖြေမဟုတ်ပါဘူး။
5 အာဟာရ - အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းအင်ရှိရန်သင်၏စွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးလာသည်။ သင်စားသောအရာသည်သင်ခံစားရပုံအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကယ်၍ သင်မှန်စားလျှင်စွမ်းအင်ပြတ်တောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးဖျားနာခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ငါကျိန်းသေအာဟာရအကြံပေးဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်အရင်းအမြစ်များကိုထွက်ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒါဟာဘယ်အရာကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထားကအလွန်အရေးကြီးသောကြောင်းသိသာဖြစ်သင့်သည်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာသလားနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာပါ။ ငါ့အဘို့ငါသကြားသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာမစားကြဘူး။ ငါတစ်နေ့ရေ 1.5L သောက်ရနဲ့ကျွန်မပိုပြီးစက်ရုံအခြေစိုက်အစားအစာများကိုစားရန်အပိုအားထုတ်မှုပါစေ။ ငါသည်ငါ၏အစားအသောက်ငါးကိုဆီစတာတွေနဲ့အတူဖြည့်စွက်အဘယ်သို့ငါသော်လည်းအရေးအပါဆုံးမယ့်လူကြီးမင်းသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သွင်းထားသောအရာကိုဆုံးဖြတ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရန်အချိန် Make, ကောငျးအလှနျသငျ့ရဲ့ရေခဲသေတ္တာစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေစေရန်အစာကိုဝယ်ကြဘူး။
6 အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်အသုံးစရိတ် အာဟာရကဲ့သို့ပင်ဤအလေ့အထသည်သင်၏အချိန်ကိုတက်ကြွစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းထက်သင်ရွေးချယ်သောအရာဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကျွန်ုပ်၏ငွေကြေးကိုစီမံရန်ကြိုးစားသည်။
သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်မှ / လူကြီးမင်း reactivity ကို၏အယူအဆ Apply နှင့်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲခြင်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မူဘောင်ရှိသည်။ သငျသညျဤဝယ်ယူမှုအောင်အပေါ်စီစဉ်ထားခဲ့သလား အကယ်. မပေးပြီးတော့မလုပ်ကြပါဘူး။ တစ်ဦးဝယ်ယူစီစဉ်၏သဘောသဘာဝကြောင့်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်တွေနဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုထကြွလွယ်သော / reactive ဝယ်ယူအောင်၏သဘောသဘာဝ '' ဒါကြောင့်ဒီမှာဖြစ်ပြီးအခုငါ့ကိုကျေနပ်ပါလိမ့်မယ် '(အများအားဖြင့်စားသုံးသူ / အဆင်ပြေစေရန်ပစ္စည်းများ), အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်
7 ဦးနှောက် Buster + လက်ရှိပွဲများ - ကျွန်ုပ်၏နံနက်ပိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးပညာရှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်နယူးယောက်ခ်ခေတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆောင်းပါးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ခံနှင့်ဘဝတွင်ကျွန်ုပ်နေထိုင်လိုသောအရာအားလုံးကိုကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းစွာသိရန်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသတိပြုမိရန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြissuesနာများ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုနားလည်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါသည်လည်းငါ၏အဝေဖန်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နေ့တိုင်းငါတဦးတည်းအလွန်အမင်းခက်ခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်။ တကယ်တော့ငါကသာအချိန်ခန့် 30% ကသူတို့ကိုထွက်တွက်ဆ။ ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူတွင်ငါအိုင်ကျူ, Mensa, မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်သက်တာယူမယ်လို့ဦးနှောက် buster အမျိုးအစားစာအုပ်တွေတစ် repository ကိုရှိသည်။ တချို့ကပြဿနာများငါဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုကြည့်သည်အထိအခြားသူတွေငါ့ကိုသုံးဆယ်ကို ယူ. ငါးမိနစ်အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်။
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run သို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာလုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုကြင်နာများမှာ (သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမှာကြောင်းအနေအထားအတွက်ဖြစ်ချင်) အကယ်. ငါသည်ဤအလေ့အထအတွက်လုံလောက်သော မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်လို့မရပါဘူး။ သငျသညျချွန်နှင့်အသိပေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကာလ။
8 Social - နေ့စဉ်လူမှုရေးစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်အားထုတ်တယ်။ သင်၏လူသားများနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ ၀ တွင်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါသည်ဤအလေ့အကျင့်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုရှောက်သွား။ ငါသည်သင်၏ပတ်ပတ်လည်ကလူလျော့နည်းသင်က ဦး စားပေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် (ငါ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အခုအချိန်မှာငါ့ကိုအသစ်သောလူတို့ပတ်လည်၌ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါဘဝမှာအခြားအချိန်များရှိခဲ့သည်သည့်အခါထင် ငါတက်ကြွစွာဖြစ်ပျက်စေရန်ခဲ့ရသည်)
ကျွန်မအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ခဏငါတကယ်ဖြတ်ပြီးဖယ်ငါ့အမှတ်ရရန်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့အခြားလူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်အခါကြမ်းပြင်ပေးခြင်း, နားလည်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူလူကိုနားထောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အဖြစ်ကောင်းစွာဆက်သွယ်နေချိန်တွင်ကျွန်မမျက်လုံးချင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုပြုမိပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကြွလာသောအခါမည်သို့ပင်ထွက်သွားနှင့်ချဉ်းကပ်အားလုံးမည့်ဟန်ရှိပါသည်။
9 ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤအလေ့အထသည်အလွယ်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မိနစ်သာသင့်ဘွဲ့သည်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုမကြာခဏဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းများ မှလွဲ၍ ဤတွင်ရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးများမများပါ။ တိုတောင်းသောကာလ၌သင်၏အဝတ်လျှော်လုပ်ခြင်း, သင်၏ဟင်းလျာများစုပုံတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နှင့်သင်၏အိပ်ရာအောင်မကသင့်ကိုစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးနိုင်ပြီးအခြားစီမံကိန်းများတွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
10 စီမံကိန်း 1,2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဆတစ်ပါတ် - ကျွန်ုပ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်ရန်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ် ၂ နာရီပိတ်ထားသည်။ ဤသည်မှာစီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အစီအစဉ်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အားအလေးမခြင်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းအချို့ကိုအမီလိုက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်ဆွဲခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊
တစ်ဦးချင်းစီရက်သတ္တပတ်၏အစအဦးမှာအဘယ်သို့ငါနှစ်ခုကိုငါအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စီစဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်မအတွက်သူတို့ကို fit ဖို့အချိန်ကိုရှာဖွေစီမံကိန်းများကိုကိုရွေးချယ်ပါ။ '' မြေမှုန့်စုဆောင်းကြသည်ဟောင်းစီမံကိန်းများကို revitalizing တစ်လမ်းအတိုင်းဤအလေ့အထကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သင်အသစ်တစ်ခုခုကိုစတင် စဉ်းစားခဲ့့ပေမယ့်မှန်းကျင်တယ်ကြပြီမဟုတ်။
11 Podcasts / ကို TED Talk ကို / တက္ကသိုလ်ပို့ချချက် - အကယ်၍ သင်ဟာဗဟုသုတရလိုတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ podcasts တွေကိုနားထောင်ခြင်း၊ Ted ဆွေးနွေးပွဲများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပါမောက္ခများနှင့်သုတေသီများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရှုသင့်သည်။
ဤသူကားငါသည်၎င်း၏ကာလတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်နှစ်မျိုးလုံးအတှကျပေါင်းစည်းတဲ့အလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုအသုံးအနှုန်း၌ငါကစိတ်ဝင်စားဖို့အသစ်များကိုသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူရန်ရှာပါ။ အကြိမ်တစ်ဦးကအများကြီးကငါအချိန်တွင်စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်ကိုအခြားကြိမ်လုံးဝအသစ်ကယင်း၏တစ်ခုခုပါပဲ။ တစ်ခုခုကိုလမ်းယနေ့ငါရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်တောက်ပစိတ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်နှင့်ကမ္ဘာငါ၏နားလည်မှုတိုးချဲ့တာပါ။
သငျသညျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီပစ္စည်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်စေ့စပ်လျှင်, ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘယ်အရာဖြစ်ပါ့မလား အသိပညာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မတူညီကြဥစ္စာဓနအပြင်သင်အတူတကွစည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲရန်စတင်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်အသိပညာသင်သည်အခြားလူများပူဇော်နိုင်တန်ဖိုးကိုနှငျ့ဉာဏျပညာမယုံနိုင်စရာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကြီးထွားလိမ့်မယ်။
* လက်တွေ့ကျတဲ့အစွန်အဖျားသည်, သင်သည်သင်၏ iPod အပေါ်စိတ်ဝင်စားနေနှင့်ကျင့်သုံးနေချိန်တွင်နားထောင်ရန်ဆွေးနွေးပွဲတစ်တန်းစီပစ်။
12 ဘာသာစကားများ - နေ့တိုင်းဘာသာစကားအသစ်သင်ယူရန်မိနစ် ၃၀ ကြာသည်။ ဒါကငါပေါင်းစည်းရန်ရုန်းကန်သောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးလုံးဝနီးပါးမသိသည်နှင့်၎င်းသည်နေ့စဉ်လုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ ကျွမ်းကျင်မှု၏ "S" ကွေးသည်အလွန်ရှည်လျားပြီး (နှစ်များ) ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဖြစ်ချင်တော့ရေရှည်မှာအကျိုးကျေးဇူးများအတော်လေးအကြိုးရှိရပါမည်။ ငါသည်လက်ရှိတွင်တစ်ဦးတည်းသာဘာသာစကားကိုပြောဆိုသကဲ့သို့ငါသာမှနျးနိုငျသညျ, ဒါပေမယ့်အီတလီမှာလေ့လာနေငါ့အချိန်ကနေငါဘာသာစကားကိုပြောသောခဲ့သောကျွန်မအတွေ့အကြုံထဲကအများကြီးပိုရတယ်မယ်လို့သင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ bi / Multi-lingual ဖြစ်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှုထောင့်ကနေလာမယ့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ပါလိမ့်မယ်။
ငါ့အဘို့, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုနယျလှညျ့၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖြုန်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ သငျသညျဘဝကိုနောက်ထပ် 50 / 60 နှစ်ပေါင်းဒီမြေကြီးပေါ်အသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ထားလျှင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများအခြားဘာသာစကားများ၏တစ်သက်တာအထိသငျသညျဖွင့်လှစ်ခြင်းငှါမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပယ်မဖြတ်ပါနဲ့။
အချို့သောလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံဉာဏ်ငါ Rosetta သောကျောက်အကြံပြုစတင်။ ဒါဟာသင်စတင်ခဲ့ရတဲ့အဘို့ကြီးစွာသောလမ်းကြောင်းတစ်အမြင်အာရုံအစီအစဉ်ကိုပါပဲ။ (အင်တာနက်မှတဆင့်) ရေဒီယိုစကားပြော Listen နှင့်သင်အလေ့အကျင့်ကိုကူညီလေ့ကျင့်ခန်းအတူဘာသာစကားစာအုပ်ရ။ အမျိုးသမီးအတွက် join ဖို့သင့်မြင်တတ်သောကိုရယူပါ။ သင်နှင့်အတူစကားပြောလေ့ကျင့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါကဒါဟာသိပ်လုပ်ငန်းစဉ် accelerates ။
ကျနော်တို့အင်တာနက်အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးအမျိုးဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျဘာသာစကားတစ်ခုကိုကောက်ကိုကူညီအရင်းအမြစ်များထွက်ရှိပါတယ်သူတို့အခမဲ့များမှာ - သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
13) နောကျနေ့ကစီစဉ် - ဒါအရမ်းကြီးတယ်
သငျသညျသင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့စနစ်ကထွက်တွက်ဆအဖြစ်ဤသေးငယ်တဲ့သင်ယူမှုကွေးရှိကွောငျးသတိပြုပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်စာရင်းတစ်ခုအပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသင့်ရဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းမှတဆင့်အချိန်ဇယား, ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံခဲတံထွက်စီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုက်တယ်။ သငျသညျအသီးအသီးအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးဆုံးအောင်မည်သည့်အခါကအနီးစပ်ဆုံးကြိမ်သတ်မှတ်ရပါမည်) အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးကိုသင်အလွယ်တကူဖြစ်ရမည်) 1 နှင့် 2: မည်သို့ပင်နည်းလမ်းကနှစ်ခုလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ထင်တချို့အချိန်ရှိသည်တဲ့အခါမှာသင်လုပ်ကဲ့သို့သင်တို့အနက်ဖြန်နေ့၌ကြည့်ရှုချင်သောအရာကိုထုတ်စီစဉ်ထားသည်။ သင်ကိုယ်သင် (များသောအားဖြင့်နံနက်) ရန်ရှိသည်ကိုသိအချိန်ကိုသင်လုပ်နေစေခြင်းငှါအဘယျသို့မှအဖြစ်အများအပြား variable တွေကိုရှိပါသည်ရှိရာကြိမ်ထက်ပို ridgid ဖွဲ့စည်းပုံမှာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တော်ကျွန်, မသင့်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုအရာကိုသင်ယူဆလမ်းကိုမသွားကြပါလျှင်စိတ်ဆိုးရဘယ်တော့မှမ - ကလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့့လမ်းညွှန်ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်, ပျင်းရိခြင်းသို့မဟုတ်စျြလြူရှုမှုများထဲကမမြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်များ execute ပျက်ကွက်, အချိန်, များ၏စွက်ဖက်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ စိုးရိမ်မယူကြနှင့်, သင်ပြီးသားသင်၏နေ့ရက်ကာလအထဲကစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့မိတ်ဆက်ပေးတက်ကြွသောများ၏ဒြပ်စင်လမ်းသင်တို့ရှေ့နေရာ။
စိတျထဲမှာထားရန်နောက်ထပ်အရာသည်သင်၏မူလတန်းရည်မှန်းချက်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ဖို့မဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိရောက်သောဖြစ်ရမည်။ လျင်မြန်စွာသငျသညျအထဲကမီးရှို့မည်အချို့ပြင်းထန်သောအချိန်ဇယားရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒါစိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ အကူးအပြောင်းအချိန်ကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏ Allow နှင့်ပင်အချိန်ပိုမို၏အခြားပုံစံများအဘို့အသငျသညျ ORGANIZATION ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ feverishly တာဝန်များကိုကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းကို item ကနေလာမယ့်ခန့်အပြေး, သင်တို့၏ဦးခေါင်း၌ရက်ရက်စက်စက်ဦးစားပေး triaging တစ်စုံတစ်ဦး၏ရုပ်ပုံရှိပါကထို့နောက်သင်သည်သင်၏နားလည်မှုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းသွားသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအကုန်အစင်နှင့်သင်ရရှိပါသည်အရာအားလုံးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျနှေးနှေးသောအရာတို့ကို ယူ. စိတ်အားထက်သန်မှု, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူမလငျြအမွသို့မဟုတ်သတိမဲ့အတူစီရင်မည်။
14 အိပ်စက်ခြင်း - မင်းဟာ Matrix ထဲကိုချိတ်ထားတယ်မဟုတ်လား၊ မင်းကမင်းကိုဂရုစိုက်သူပဲ၊ တီဗီကြည့်တယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာအချိန်တွေကုန်သွားတယ်၊ သတိမေ့နေတဲ့အချိန်တွေကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေ။ မင်းကမင်းကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မင်းကတသမတ်တည်းနဲ့ကြီးမားတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​သတင်းအချက်အလက်အသစ်တွေကိုအဆက်မပြတ်စားနေတယ်၊ ​​သင်ကသင်၏နယ်နိမိတ်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုတွန်းပို့နေသည်၊
သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအသကျရှငျနေမယ်ဆိုရင်ဒါသဘာဝအပြည့်အဝငျသညျအကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်စေ့စပ်။ သင်ကိုယ်တိုင်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားစိတ်ဖိစီးမှု၏ပမာဏ, သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏ International, သင်သွားစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အာရုံနှင့်သက်လုံအပေါငျးတို့သခေါင်းအုံးပေါ်ကောင်းတစ်ဦးကိုးနာရီအားဖြင့် facilitated နိုင်ပါသည်။
အလေးအနက်ထားဒီ Shit ကိုယူ - သင်ကခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ် (နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကနေ REM အိပ်စက်ခြင်းမှ) အနီးစပ်ဆုံး 90 မိနစ်သံသရာတဆင့်သွားသင်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှု melatonin သင့်ရဲ့အလောင်းတွေကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်အလင်းပမာဏကိုသိရအိပ်စက်ခြင်းကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုပါက, သင်အိပ်ရာမဝင်မီကိုစားသောအရာကိုသင်တို့သိရ သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုထိခိုက်, သင်လည်းအသံကသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်အယှက်နိုငျကွောငျးကိုသိနိုငျသညျ။ သငျသညျအိပျပျြောသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းကိုငါသိ၏။ သငျသညျ (အစလူ့ခန္ဓာကိုယ်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူအချို့သောပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အခြေအနေများဆက်စပ်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်သင်သည်သင်၏အိပ်ရာ၌ရှိကြ၏အခါအတူတူပါပဲသင်ဟာရေချိုးခန်းသို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါသငျသညျဆီးဖို့ရှိသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရထင် - သင်အိပ်ချင်ရထို့ကြောင့်သာသင့်အိပ်ရာကိုအသုံးပြုပါ။ ။ ) အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့လိင်အဘို့။
ငါအဖြူဆူညံသံတစ်ပန်ကာနှင့်အတူတစ်ဦးအေးမြအခန်းတစ်ခန်း, (မဟုတ်ရင်ငါ့ကိုနှိုးမယ်လို့အိမ်တော်၌ယာဉ်အသွားအလာနှင့် creaks ထွက်ရေနစ်) တွင်စုစုပေါင်းသည်မှောင်မိုက်၌အိပ်။ လာသောအခါထံမှ 7.5 သို့မဟုတ်9နာရီဖြစ်စေငါမနက်တိုင်းတစ်ချိန်တည်းအဘို့အကြှနျုပျ၏နှိုးဆော်သံသတ်မှတ်ထားပါဘူး (နေရောင်မြင့်တက်မှုတက်ကြွလာသည်), ငါသည်ငါ့နှိုးဆော်သံ set ငါအဆင်ပြေမှေ့ရာရှိသည်နှင့်ငါအစားဆူညံသံအောင်၏တောက်ပရရှိသွားတဲ့သောနှိုးစက်နာရီအထိနိုး ငါအိပ်ပျော် (ဒါကြောင့်ကျွန်မအိပ်စက်မှုစက်ဝန်း၏အတိမ်အနက်ကိုဖွင့်နိုးကြဘူး - သင်ကြိမ်ဒါမှသာရှိစေခြင်းငှါပေမယ့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သင်ယူပါလိမ့်မယ်) ။ ဒီအချို့ကိုကြိုးစားပါနှင့်သင့်စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအံ့သြလိမ့်မည်, သတင်းအချက်အလက် retention ကို, သင်နံနက်ယံ၌သင်တို့လက်ထက်၌ဝင်ပုံကို။
15 Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - သင်ဖြစ်စေ၊ သင်အလုပ်လုပ်လိုသောလုပ်ငန်း၌ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်ဖြစ်စေလိုသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်၏တစ်နေ့တာကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
သင်တစ်ဦးအလုပ်အတွက်ညပ်နေလျှင်သင်ဖြစ်လျှင်ဤနေ့စဉ်ရိုးရာဓလေ့မှတဆင့်ခြိုးဖောကျဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်ဘူး။ သင်အထောက်အထားများ, ယုံကြည်ကိုးစားမှု, ဒါမှမဟုတ်အပြီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်သည်အထိသင်သည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများ၏ဧရိယာထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးဘဏ် Teller အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှီဝဲသော်လည်း, သင်သည်အင်တာနက်စျေးကွက်သို့ရချင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး Internet Marketing ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်သွားကြသည်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြုန်းဖို့စတင်သင့်ပါတယ်။
လူအများစုတုံ့ပြန်ဖြစ်ကြသည်ကဤနည်းစဉ်းစားပါ။ လူအများစုဟာဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အဆင်ပြေမှတဆင့်သူတို့ထို့နောက်အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူကြောင့်အလုပ်အကိုင်အရှိပြီးနောက်အလုပ်အကိုင်အဆင်းသက်။ သင်သည်ထိုလူတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ သင်ကပြောင်းပြန်ပြုလိမ့်မည်။ သငျသညျအလိုတော်သင့်ကိုယ်ပိုင်အင်အားစုကနေတဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိပြီးတော့မြေယာ '' အလုပ် '' ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတစ်ဘဝထွင်းနှင့်သင့်အိပ်မက်တွေကိုအသကျရှငျဖို့ပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အိပ်မက်၏စက်မှုလုပ်ငန်းနေပြီဆိုရင် stagnate ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ အဆက်မပြတ်အသစ်တွေပစ္စည်းသင်ယူခြင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, ပြိုင်ဘက်စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်သတင်းကိုချဲ့ထွင်အာရုံစိုက်ပါ။ ဒီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင်တို့ပြုသမျှကိုပိုမိုတန်ဖိုးအားပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်နှင့်အောင်မြင်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
16 ဂျာနယ် + သုတေသန - ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။
တစ်ဂျာနယ်ကဘာလဲ? တစ်ဦးကဂျာနယ်သင်သည်သင်၏အတှေးအထွက်ရေး, ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ကြည့်သုံးသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ကသင်တို့၏အကြံအစည်၏ထင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုရေးဖို့နှင့်စဉ်းစားပါ။ (Meta-meta သိမှတ်ခံစားမှု) သင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိသော tool ကိုဖွစျစနေိုဘယ်လိုကြည့်ပါသလား?
ဒါကအထက်တန်းကျောင်းနို့ထွက်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်, သင်တို့၏အကြံအစည်အားခြေရာခံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်တိုးချဲ့ရန်, သင့်တိုးတက်မှုနှုန်းအရှိန်မြှင့်နှင့်သင့်တိုးတက်မှုအပေါ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ကိုအသုံးတဲ့ tool တစ်ခုပါ။ ဖြစ်ပျက် Shit? အဲဒီအကြောင်းရေးပါ။ သတိရှိရှိသင်တို့၏အကြံအစည်မှ syntax အတွက်အလွန်လုပ်ရပ်သင်ပိုမိုဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်လာကူညီပေးနိုင်ပါသည်နှင့်သင့်အသက်တာ၌ဖြေရှင်းရေးပြဿနာလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ။ သုတေသနအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပျတဲ့ဒုတိယအပိုင်းသည်သင်၏ဂျာနယ်အရေးအသားရိုးရာဓလေ့ရှိပါသည်။ သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်စေသကဲ့သို့သင်တို့အမှန်တရားနှင့်လမ်းညွှန်မှုထွက်ရှာအံ့သောငှါသင့်ပါသည်။ ကျနော်တို့အင်တာနက်ရှိသည်နှင့်ကတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘမျိုးဆက်သည်သူတို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသတင်းမှားနှင့်အတူအသက်ရှင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစွာဖြင့်လူသားအသိပညာ၏ရှေ့တန်းကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့် ၀ င်ရောက်ရန်ဇိမ်ခံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုလောင်စာရန်ဒီဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုသုံးပါ။
အပြင်ကျသွား - လေးအမျိုးအစားများ
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသငျသညျကွိုးစားဘယ်လောက်ခက်ခဲ, သို့မဟုတ်သင်အတွက်ထားဘယ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသင်ပါလိမ့်မယ် - အချိန်များတွင် - ဆိတ်ကွယ်ရာကျလိမ့်မည်။ ဖျားနာ, စျြလြူရှုမှု, 'တိုတိုသက်တမ်းမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ' 'ရယူခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်စားသုံး: ငါကဒီဖြစ်ပျက်လေးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။
သငျသညျမိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဆိတ်ကွယ်ရာကျလိမ့်မည်အသုံးအများဆုံးလမ်းစျြလြူရှုမှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစျြလြူရှုမှုသေခြင်းတရားကြောင်းကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ စျြလြူရှုမှုသေခြင်းတရား IS ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုသတ်ခြင်းနှင့်ပျင်းရိခြင်းသို့သငျသညျကိုစို့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအနိမ့်သိစိတ်သို့ချော်ကြောင့်တွေ့ကြုံတတ်၏။ သင့်ရဲ့အပြုအမူအတွက် Correlatory display တွေပေါ်ထွက်လာ: စသည်တို့ကိုစိတ်ကျရောဂါ, စျြလြူရှုမှု, အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်အနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားအတွေးပုံစံများ, လမ်းကြောင်းသငျသညျကိုချွတ်ပစ်နှင့်စျြလြူရှုမှုသို့သင်နစ်မြုပ်နိုင်သောဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ်: တိုးတက်မှုဆုံးရှုံးမှု, အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် '' အပြာ '' feeling, ဗီဒီယိုဂိမ်း, စှဲ, ဆင်းရဲသောအစားအစာ, အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်း, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ဘဏ္ဍာရေး / မိသားစု / လူမှုရေးဖိအား။ တာဝန်ယူပြီးသော့ချက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဤသည်ကိုသိသောဥာဏ်ကိုငါ့ဦးနှောက်ကိုငါသည်ငါ့တာဝန်အပေါ်ထွက်ရငျဆိုငျအဘယ်ကြောင့်အဘို့ရိက္ခာနှင့်ဆင်ခြေအတူတက်လာလိမ့်မည်ဟုသောအခါအကြှနျုပျကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဆင်ခြင်တုံတရားတစ်ခါတစ်ရံတော်တော်လေးကောင်းသောခဲ့ကြသည်ပေမယ်အချက်အလက်များရှိကြ၏။ ငါမတတျနိုငျသ (ကျနော်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ကျွန်မကြောင့်စသည်တို့တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်, ဖျားနာခဲ့သည် (သင့်ဦးနှောက်ကို) အလွန်လိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ပြီး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတတျနိုငျ) ကြှနျတေျာ့နေ့စဉ်ရွေးချယ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုဖုံးကွယ်နှင့်မည်သို့သူတို့သည်ငါ၏ထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ shitty အစားအစာကိုစား, ဆင်းရဲသောအိပ်ပျော်ခြင်းရ, သင်လျော့နည်းတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျစျြလြူရှုမှု၏ရေကျင်းထဲသို့ကျတဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းထွက်သင့်ရဲ့ Bootstrap အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ဆွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုထွက်ရေးသားဖို့အချိန်ကိုယူကြပြီလျှင်သူတို့ကဒီအခြေအနေမှာအလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်သော့ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အပေါ်မှာ Read, သူတို့ကိုသုံးသပ်နှင့်သူတို့ကိုကိုယ်ကျူးလွန်။ အဆိုပါမြန်သင်သည်သင်၏တန်ဖိုးများကိုယ့်ကိုကိုယ် recommit နှင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်မရ, ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဤဖြစ်စဉ်မှတဆင့်အများကြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားပါလိမ့်မယ်
သငျသညျနာရတဲ့အခါသင်လုံးဝလမ်းကြောင်း၏ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ်ဦးကိုမှလေးအအေးမိတစ်နှစ်ဖမျးတယျ။ ဒါကဆုတ်ယုတ်မှုဆင်းရဲများနှင့်နှောင့်အယှက်နှစ်ခုမှလေးပတ်ကြာပါတယ်။ မဟုတ်အများကြီးကိုသင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထက်အခြားအကြောင်းလုပျနိုငျ (ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတော်တော်လေးထိရောက်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်လှည့်အဖြစ်! သင်ဟာအစဉ်အဆက်နာရရန်မလိုပါ ... [သောက်စရာရေ, Bing သောက်သုံးရေကိုရှောင်ရှား, ရှိသမျှကိုသင်၏ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ရအိပ်စက်ခြင်း, ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး , သင့်လက်များကိုဆေးကြောခြင်း, ပုံမှန်အပန်းဖြေ။ သာလျှင်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားဒါပေမယ့်ငါအများကြီးရက်ဆက်တိုက်နေမကောင်းဆင်းရဲသားကိုမြည်းတယ်သည့်အခါ)] အမြဲတမ်းအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့
ဆိတ်ကွယ်ရာကျသွား၏တတိယအမျိုးအစား Tyler သင့်ရဲ့ 'တိုတိုသက်တမ်းမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ' 'ကိုခေါ်လိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ သင်နှင့်အတူရိုးသားဖို့, ငါသည်ဤကြောင်းမကောင်းထင်ကြပါဘူး။ ငါဒီ mode မှာဘာမှအမှုကိုပြုတဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းခဲ့သည်ရှိရာကြိမ်ငါ၏ Excel ဇယားမှာပြန်ကြည့်ပါ။ ငါမသောက်နဲ့ဆေးလိပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်နေတာမည်ဖြစ်သည်။ ငါကာလအတွင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်ဆွဲရာငါးခုနေ့က bender ပြောကြပါတယ်။ Retrospectivly ငါရှိသောကြောင့်သူတို့အအချိန်လေးကိုငါသိပ်ပျော်စရာရှိခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းတစ်ဦးအရာကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေတွေ့ဆုံသည်နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောဆက်ဆံရေးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ဒီ mode မှာသငျသညျ '' အပေါ် '' မယ့်အခါ။ သင့်ဦးနှောက်နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်, ငါ့ကိုရန်၎င်း၏ဒီတော့အံ့သြဖွယ်ပေါ်မှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
ကို 'တိုတိုသက်တမ်းမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ' 'mode ကို၏သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားထံမှကသင်သည်ရှိသည်ထက်ပိုအရင်းအမြစ်များကို (ငွေ, အပန်းဖြေအချိန်, တာဝန်ယူမှုမရှိခြင်း) သည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ သငျသညျစသညျအလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မပိုပိုက်ဆံရှိပါကကဲ့သို့ပြင်ပအင်အားစုများကအတူတူသင့်ရဲ့ shit ရရန်သင့်အားအတင်းနိုငျသညျ, စဉ်းစားပါ။ သင်မိန်းကလေးတွေဆွဲပေမယ့်အဘို့သန့်ရှင်း fuck ဆိုတဲ့ကူညီပါဘူး - သင် mode မှာပါပဲသောအခါမူကားသင်သည်သင်၏ငွေ, အချိန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကွာ rationalizing မှာ fuck ဆိုတဲ့ကောင်းသောသေချာပါပဲ။ ဒါနဲ့သော့ကိုဒီသို့လူကြီးမင်း၏ Element တစ်ခုရဲ့ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်သွားပါက OK ကိုရဲ့ကြောင်းဝန်ခံ။ သင်နောက်ဆုံးမှာအတူတူသင့်ရဲ့ shit ရလိမ့်မယ်ငါတို့သိကြ၏။ ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုစမတ်ဖြစ်နှင့်မည်သည့်အဓိကတာဝန်များအပေါ်ထွက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါဘူး။
ငါချီးမြှောက်ရန်စားသုံးကတိကဝတ်ခဲ့သောအခါငါတသမတ်တည်းငါ၏အလေ့အကငျြ့နှင့်အတူခြေရာခံကိုချွတ်လဲကြလိမ့်မည်စတုတ္ထနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီမိသားစုတာဝန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးသွားနေ့က, ဒါမှမဟုတ်ငါအဘို့အ prep ခဲ့ကြီးမားတဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်ကြောင့်သင်ရုံသင်ပြုနှင့်အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ်ရရှိရန်လိုအပ်ဘာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရာသည်ဤမျိုးသော်လည်းထကြွလာသည့်အခါကိုယ်ကတချို့ငွ hurr durr ပြည်နယ်သို့နစ်မြုပ်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ပြန် bounce ဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမယ့်သတိထားမိ - သောအဆိုးဆုံးပါပဲ။
Rebounding - နှစ်ဦးဖြစ်စဉ်များ
ငါ၏အ Explorer ထဲမှာငါနှစ်ခုဖြစ်ရပ်သတိပြုမိသည်။ ပထမဦးဆုံးသင်ရုံသင်၏အသက်တာ၏တဦးတည်းဧရိယာအာရုံစိုက်မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျအလေးအနက်ထားတဦးတည်းစည်းကမ်းအရာအားလုံးအပေါ်စတင်အလုပ်လုပ်ပါလျှင်အောက်ပါအတိုင်း။ သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အားလုံးဒေသများရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်တာတွေစတင်ပါ။
လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားကျသွားသောအခါငါသတိထားမိကြောင်းဒုတိယဖြစ်ရပ်ဆန်းသငျသညျအစဉျအမွဲအရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းပြန်လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင်ခန်းစာချွတ်ကျသွားရာမှသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ခြင်းအရာကိုသင့်ရဲ့အဓိပ်ပါယျယခုတိုးချဲ့ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်လေ့လာသင်ယူနေသောကြောင့်ဤမယ်ဆိုရင်သေချာမဖွစျ၏။ ရှေ့မှာတိုးတက်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်သိသာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေလမ်း, သင်လဲကျနှငျ့သငျပြန်အားကောင်းတက်ရ။
လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားကျသွားကာရှောင်လို့မရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (အများကြီး) ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကိုထားပါ။ ၎င်း၏ပုံကိုလျင်မြန်စွာသင် (အသိအမြင်နှင့်အဆင့်မြင့်ဝိညာဏ်) သတိထားမိခြင်းနှင့် recommit (ညာအရေးယူ) သင့်ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မည်။
ငါ၏အစွမ်းဆောင်ရည်ကျော်ပြန်ရှာနေငါသည်ငါ၏အလေ့အကျင့် Streak လိုကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အဲဒီမှာယေဘုယျအရှိန်အဟုန်တစ်ခုဒြပ်စင် (ကနေ့ရက်ကာလ၌ Excercising သင်သည်အခြားတာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့အရှိန်အဟုန်ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ) နှင့်ထို့နောက်စည်းကမ်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရှိန်အဟုန်တစ်ခုဒြပ်စင် (သင်မနေ့ကတွေးတောဆင်ခြင်လျှင်ယနေ့သင်လိမ့်မည်ပိုဖွယ်ရှိသည်) လည်းမရှိ
အဆိုပါရလဒ်ကြောင့်စည်းကမ်းများကို Streak ဖြစ်ပါတယ်။ သင်နေ့တိုင်းနှင့်အတူကပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပြေးရှိသည်, ထိုအခါမူကားသင်ကသင့်ရဲ့အချိန်စာရင်းအတွက် fit ဟန်ပဲဘယ်တော့မှရှိရာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပတ်ပြေး, ရပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အပိုအားထုတ်မှုပြိုကွဲဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအလေ့အကျင့်အားကောင်းလာစေပြီးထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတုံ့ပြန်မှုသင့်ရဲ့ကြီးထွားဖို့ဒါသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအကြောင်းပြချက်နောက်ဆုံးဤအပိုင်းကို left ... ဒီထိုကဲ့သို့သော Power အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အလောင်းကြီးထွားမှုအတွက် tools များနှင့်အတူနှငျ့သငျရစိုးရိမ်ပူပန်ခံစားမှု tool ကို IS ကြောင်းတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးမသက်မသာစိုးရိမ်စိတ်လည်းမရှိကိုသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုမသိကြပါနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ။ ကိုယ်တော်၏ဆင်းရဲသားအတ္တထိတွေ့နေသည်နှင့်သင့်ခံစားကောင်းသောယုံကြည်ချက်စနစ်များကိုတုန်လှုပ်နေကြသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်၏ဤခံစားမှုကနေ run မထားပါနဲ့။ ဒါဟာခံစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်နှင့်သူတို့ကိုပယ်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှ SO လူ့သဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဘဏ်ငွေလက်ကျန်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သင်အနိုင်နိုင်တစ်ဦးမသက်မသာစိုးရိမ်စိတ်ကိုသင်ကျော်လာ, လာမယ့်လအတွင်းငှားငွေအလုံအလောက်ရှိနားလည်သဘောပေါက်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်အိပ်ဖမ်းမိတယ်နှင့်တစ်ဦးမသက်မသာစိုးရိမ်စိတ်ကိုသင်ကျော်လာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဘာလုပ်သင့်ကိုသိကာမသက်မသာစိုးရိမ်စိတ်ကိုသင်ကျော်လာတစ်ခုချဉ်းကပ်ကြည့်ရှုပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အတ္တကိုသင်အကောင်းဆုံးရမသွားပါစေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အတ္တသင်သည်သင်၏သာမန်နှင့်ကျရှုံးမှုနှင့်အတူ OK ကိုဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုအကြောင်းပြချက်ပေးခြင်း, ကွာသင်၏အသက်တာကျိုးကြောင်းညီညွတ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်စိတ်မသက်မသာသောစိုးရိမ်မှုကိုခံစားရသောအခါအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီးဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အဘို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါ။ ခင်ဗျားဟာငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်မယူတတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်မိနိုင်တယ်။ အတ္တ၏တုန့်ပြန်မှုသည်သင်၏အခြေအနေကိုဖြောင့်မတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ “ ငါပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖို့လိုတယ်၊ ငါဒီဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်” အကယ်၍ သင်ကြီးပွားချင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ စိုးရိမ်စိတ်ကိုသတိရှိရှိဆင်ခြင်ပြီးသင်၏အခြေအနေအတွက်တာ ၀ န်ယူပါ။ “ လွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်မရဲ့ငွေကိုအလွန်အမင်းညံ့ဖျင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ shit ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ကြောင်းစိုးရိမ်တုံ့ပြန်မှုသို့ရေငုပ်ခြင်းအားဖြင့်, အပေါ်သွားနှင့်ဖြစ်ပျက်သမျှအဘို့အ FULL တာဝန်ယူပြီးရဲ့အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာဖွေ, သင်ပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်အနာဂတျတှငျကွီးထှားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းဖျက်ဆီးနှင့်သင်၏အတ္တသို့မဝယ်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ကြီးထွားဖို့အဓိကသော့ချက်ကသင်၏စိတ်ခံစားမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်, သင်က (hint- ဘာဝနာ) နဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ကောင်းသောအမှုကိုပြုမယ်လို့